Sina 4㎡ SOLAR MOBILE LED TRAILER orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | JCT
4m2 tranofiara notarihin'i finday solar(Model: E-F4 Solar） Voalohany mampifandray ny efijery feno masoandro sy tariby manjelanjelatra ivelany sy ny tranofiara fanaovana dokambarotra finday ho lasa organika iray manontolo. Mampiasa mivantana ny herin'ny masoandro ho toy ny famatsiana herinaratra izay tsy misy fanelingelenana, azo antoka, azo antoka, mahomby, mahomby kokoa amin'ny tontolo iainana ary mifanaraka amin'ny politikan'ny angovo sy angovo vaovao, manaparitaka ny fetran'ny fomba famatsiana herinaratra taloha izay mila mahita famatsian-kery ivelany na gropy.
360 degre nivezivezy efijery nitarina
Raha tokony ho ny streamline an'ny vokatra teo aloha, ny tranofiara vaovao dia mandray endrika tsy misy rafitra miaraka amin'ny tsipika madio sy madio ary ny sisiny maranitra, maneho tanteraka ny fahatsapana ny siansa, ny teknolojia ary ny fanavaozana ny toetr'andro. Izy io dia mety indrindra ho an'ny mpitarika fifamoivoizana, fampisehoana pop, fampisehoana lamaody, famoahana vokatra vaovao amin'ny fiara elektronika, sns.
4m2Ny tranofiara mandeha amin'ny alàlan'ny finday an'ny masoandro dia mandray ny rafitra fiakarana hydraulic mifindrafindra amin'ny haavon'ny dia 1m ary azo antoka sy milamina izy io. Ny haavon'ny efijery LED dia azo ovaina mifanaraka amin'ny filan'ny tontolo iainana mba hahazoana antoka fa ny mpihaino dia mahazo ny zoro fijery tsara indrindra.
4m2Ny tranofiara tarihan'ny finday mandeha amin'ny masoandro dia manana fitaovana inertial sy frein-tanana, ary azo sintonina hifindra amin'ny fiara izy mba hanaovana fampielezam-peo sy fanaovana dokambarotra. Ny rafitra mekanika an'ny tongotra manohana tanana dia mora sy haingana ny fiasa.
Famahanana herinaratra avy amin'ny masoandro sy bateria
Panneaux solaires 4 pcs 180W. Ohatra, ny fotoana mahomby amin'ny famahana ny masoandro dia isaina 5 ora isan'andro. 180 * 4 * 5 = 3600W, ity herinaratra ity dia mety haharitra 1 andro. Izy io dia maharitra amin'ny andro main-tany miaraka amin'ny bateria 12pcs 2V 400AH.
4m2Ny tranofiaran-tariby mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia manana maodely famatsiana herinaratra tsy miankina sy tsy tapaka ary fahombiazana avo lenta. Izy io dia azo antoka, azo antoka, marin-toerana, tsy mitabataba, sariaka amin'ny tontolo iainana ary tsy voafetran'ny toerana jeografika.
1. Size: 2700 × 1800 × 2300mm, fitaovana inertial: 400mm, tsipika fitondra: 1000mm
2. efijery LED mamonjy angovo miloko ivelany (P10) habe: 2560 * 1280mm
3. Rafitra fananganana hydraulic: Varingarin'i hydraulic nafarana avy any Italia, haavon'ny dia 1000m.
4.Fanjifana herinaratra (fanjifana antonony): 50W / m2 (Norefesiny).
5. Rafitra horonantsary multimedia: Tohano ny format 4G, U disk, endrika video mahazatra.
Model E-F4 Solar(4m2 SOLAR MOBILE LED TRAILER )
Brand JCT Haben'ny ivelany 2700mm (L) x1800mm (E) x2300mm (H)
notapahiny Tanana / Hydraulika kodiarana Kodiarana matevina
Tongotra manohana 4pcs
Efijery fitsitsiana angovo LED
Haben'ny efijery 2560mm (W) * 1280mm (H) Dot Pitch 10 mm
Haben'ny Module 320mm (W) * 160mm (H) ny famirapiratry ny mazava ≥5500cd / m²
Max Heryfihinanana 150W / m2 Faharetana 100,000hours
Rafitra fananganana hydraulic Fananganana 1000m
Rafitra mihodina hydraulic Ny efijery dia afaka mihodina 360 degre
Haavo mifanohitra amin'ny elatra Manohitra ny haavon'ny rivotra 8 aorian'ny fisandratana 1000mm
Size 1480mm x 670mm * 4pcs Power 180W * 4 = 720W
Volta fampidirana 9-36V Volapoky famoahana 24V
Naoty famahanana 720W / 24V
Herin'ny farafaharatsiny amin'ny filaharana photovoltaic 1170W / 24V
Player Nova TB4-4G Karatra fandraisana Nova MRV316
Previous: 2㎡ TRAILER LED MOBILE SOLAR
Manaraka: Tranofiara fifamoivoizana VMS- loko feno
JCT 6.2m nitarika kamio kamiao- Foton Aumark
Kamiaona finday taratra finday, Nentina amidy kamiao finday, Led Mobile kamio, Led Mobile Trailer, Kamiaona dokam-barotra notarihin'ny finday, Mobile Led Billboard kamiao,